Sọpụrụ na-ewetara Honor V10 ọhụrụ na 6GB nke RAM, ihe nhazi Kirin 970 nwere 8 isi na ahụ igwe | Akụkọ akụrụngwa
Sọpụrụ na-ewetara Honor V10 ọhụrụ nwere 6GB RAM, ihe nhazi Kirin 970 nwere 8 cores na anụ ahụ
Jordi Gimenez | | Foto
Sọpụrụ gosipụtara awa ole na ole gara aga ọkwa ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, na nsọpụrụ V10. N'okwu a, agbapụrịrịrịrịrịrị amamịghe maka ụdị nke nwere 6GB RAM, igwefoto azụ abụọ yana ihuenyo 5,9-anụ ọhịa Full HD +.
Ngwaọrụ ọhụrụ a nke otu n'ime ndị nrụpụta kachasị mkpa na ahịa na mba ahụ na-eweta na China, na-enye njedebe kachasị ya ígwè ahụ na ihuenyo na-agbakwunye na ejiji nke ngwaọrụ kachasị ọhụrụ nke ndị nrụpụta gosipụtara, yana obere okpokolo agba na 2,5D imecha n'akụkụ.
1 Nhazi nke Honor V10 a
2 Sọpụrụ V10 nkọwa
3 Ihu ihu na purest iPhone X ịke
Nhazi nke Honor V10 a
Mgbe anyị na-ekwu maka nsọpụrụ, anyị enweghị ike ileghara ọrụ ọma ha na-arụ anya na atụmatụ ha anya, ọ bụ ezie na igwefoto abụọ dị n'azụ na-apụta ntakịrị site na azụ nke ngwaọrụ ahụ, anyị na-echekwa ọnụ ya na njedebe zuru oke. El metal ahụ dị na agba dị iche iche: Aurora Blue, Red, Gold na Black, ha na-eme ka otu a dị egwu.
Anyị nwere ike ikwu na ọrụ a mere dị ezigbo mma n'ihe gbasara atụmatụ ya na ihe kachasị mkpa maka ụfọdụ bụ na n'agbanyeghị obere okpokolo agba, ngwaọrụ ahụ nwere a akara mkpisiaka na ihu, nke na-enyere ndị ọrụ ohere ịnweta na ọ dịghị ihe jọrọ njọ.
Sọpụrụ V10 nkọwa
Anyị ga-dokwuo anya na e nwere nsụgharị abụọ dị a 4 GB nke Ram na 64 GB nke nchekwa na ike ọzọ dị ike na 6 GB nke Ram, 64 GB ma ọ bụ 128 GB nke nchekwa dị n'ime. Nke a yana Huawei onye nhazi ya, ihe Kirin 970 nwere 8 cores na Mali-G72 MP12 GPU, mee ka Honor V10 bụrụ ezigbo ama ama ama ama. Na mgbakwunye na data ndị a anyị nwere:
5.99-anụ ọhịa (2160 x 1080 pikselụ) Full HD + 18: 9 Ngosipụta zuru ezu
Ebe nchekwa nwere ike ịgbasa ruo 256 GB na microSD
6MP (RGB) + 20MP monochrome dual camera maka azụ na vidiyo vidiyo 4K
13MP ihu igwefoto nwere oghere f / 2.0
Measuresfọdụ nhazi nke 157 × 74.98 × 6.97 mm; Arọ: 172g
Njikọ 4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS, USB Type-C, NFC
Batrị 3750mAh nke na-ebu ọnụ ngwa ngwa
Android 8.0 Oreo nwere nke ya EMUI 8.0 oyi akwa
Ihu ihu na purest iPhone X ịke
Nke a bụ ihe ọzọ nke akwụkwọ ọhụrụ Honor V10 a, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ndị China depụtaghachiri ma ọ bụ gbalịa i copyomi usoro Apple njirimara ihu ya dabere na isi 300.000 nke ihu ịbụ nhọrọ nchebe a pụrụ ịdabere na ya.
Anyị ga-ekwu okwu banyere nke a ozugbo na isiokwu ọzọ mgbe anyị jikwaa nwalee Huawei a, ebe ọ bụ na ekwurita okwu na ngosi nke iPhone Animojis. Ihe ka mma ịhụ ma gbalịa ịdị ndụ iji nweta ezigbo echiche.
Anyị nwere ọtụtụ nsụgharị na dị ka ndị dị otú ahụ ọtụtụ ahịa. Ofdị nke 4GB RAM na 64GB nke nchekwa dị n'ime ya dị $ 408, n'aka nke ọzọ, ihe nlereanya na-agbakwunye 6GB RAM na 64GB nke nchekwa dị n'ime na-ewelite $ 50 ọzọ fọdụrụ nso $ 453, na ụdị kachasị ike na-agbakwunye 6GB nke Ram na 128GB nke dị n'ime nchekwa dị ọnụ ahịa ihe dị ka $ 529.
Na China ha nwere ndoputa enwere ma ndị a ga-adị site na Disemba 5 na-esote, oge nke a ga-eme ihe ngosi na Europe nke ụdị ọhụụ nke ika ahụ. PAnyị nwere ike ijide n'aka na anyị ga-ahụ ngwaọrụ ahụ na CES dị nso na Las Vegas ma ọ bụ ihe ọ bụla mechara na MWC na Barcelona, ​​na nchekwa zuru oke.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » Foto » Sọpụrụ na-ewetara Honor V10 ọhụrụ nwere 6GB RAM, ihe nhazi Kirin 970 nwere 8 cores na anụ ahụ
Chọrọ antivirus na PC?